Wararkii ugu dambeeyay dagaalka ka socda Itoobiya | KEYDMEDIA ONLINE
Wararkii ugu dambeeyay dagaalka ka socda Itoobiya
Dagaalka ayaa maalinba maalinta ka dambeysa kusii fidaya deegaanno hor leh, waa Warbixinta Tifaftiraha Keydmedia Online ee Geeska Afrika.
ADDIS ABABA, Itoobiya - Dagaalka u dhaxeeya ciidamada Federaalka dowladda Itoobiya iyo kuwa Tigreega ayaa maalintii Tobanaad ka soconaya gobolka Tigreega, waxaana jira khasaare xooggan.
Inkastoo isgaarsiinta ay ka maqan tahay hawada, islamarkaana ay adag tahay in la ogaado xogta dhabta ah, ayaa hadane waxay Labada dhinac sheeganayaan guullo.
Saraakiisha hoggaamineysa ciidanka dowladda federaalka Itoobiya ayaa sheegay iney qabsadeen deegaanno cusub oo muhiim u ahaa Tigreega, sidoo kalena ay ka dileen ciidan badan.
Diyaaradaha dagaalka Itoobiya ayaa dagaalkan qeyb ka ah, waxaana ay gubeen keyd shidaal iyo sidoo kale hub uu lahaa ciidanka Tigreega, sida ay faafisay Warbaahinta dowladda.
Dhanka kale, hay'adda Amnesty International ee u doodda xuquuqda aadanaha waxay sheegtay in gobolka Tigraaga uu xasuuq ka dhacay, waxaana jira kumanaan shacab oo u qaxay dhanka xuduudka dalka Suudaan.
Muuqaal uu soo duubay Satellite-ka ayee ku sheegtay hay'adda in lagu muujiyey xasuuqan oo gaaraya Boqolaal qof oo aan shaqo ku lahayn dagaallada socda. Hay'addan ayaa ka codsatay dowladda federaalka ee Itoobiya iney fasaxdo Isgaarsiintii gobolkaasi si loola socdo wax walbo oo halkaasi ka dhacaya.
Ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa ku eedeeyey Tigreega in ay iyagu xasuuq u geysteen dad shacab ah, wuxuuna tilmaamay in lagula xisaabtami doono.
Dowladda Itoobiya ayaa ugu baaqday ciidanka Tigreega in ay isku soo dhiibaan, si naftooda u badbaaddo, haddii kale ay dhibaato la kulmi doonaan. Dhanka kale, TPLF ayaa shacabka Tigreega ku bogaadisay iney hubka qaataan oo ay la dagaallamaan ciidanka federaalka Itoobiya ee weerarka kusoo qaaday.
Colaad abuuri karta Dagaal Sokeeye